သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ ( ၂ ) | အတ္တကင်းစင် ဒီမိုကရေစီ လွင်ပြင်
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ ( ၂ )
ညီတော် မင်းနန် ချွန်ခန်း ဟောစာသစ် (ရွှေတောင်မြို့ ဆရာလွန်း) - ၁၉ဝ၂ ခုနှစ်
ရွှေတိဂုံ ဘုရား အမှူးကို ကျား အဖူးတက်သော ဇာတ်ဆန်း (မောင်လွမ်း) - ၁၉ဝ၃ ခုနှစ်
ကျမိုင်းမောင် နှင့် စောမြိုင် ပြဇာတ် (ဆရာလွမ်း) - ၁၉ဝ၃ ခုနှစ်
ကုလားလေး ဗျတ်ဝိ ဗျတ္တ ပြဇာတ် (ပ - အကြိမ် - ဆရာလွမ်း) - ၁၉ဝ၅ ခုနှစ်
မော်လမြိုင် ရာဇဝင် ဝတ္ထု (ပထမတွဲ - ဆရာလွမ်း) - ၁၉ဝ၅ ခုနှစ်
ကဗျာသာရ မဉ္စူ (ဆရာလွမ်း) - ၁၉ဝ၆ ခုနှစ်
ဝရမတ္တ သံခိပ် အဖြေကျမ်း (ဒုတိယတွဲ - ဆရာလွမ်း) - ၁၉ဝ၆ ခုနှစ်
အလောင်းတော် သုဝဏ္ဏသျှံ ပြဇာတ် (ဆရာလွမ်း) - ၁၉ဝ၇ ခုနှစ်
ချင်းမလေး ဝါနု ပြဇာတ်သစ် (ဆရာလွမ်း) - ၁၉ဝ၈ ခုနှစ်
သူခိုး ထိလပ် ပြဇာတ် (ပ - ဒု) (ဆရာလွမ်း) - ၁၉ဝ၈ ခုနှစ်
ကျောက်ဝိုင်း သမိုင်း၊ ရေကင်းသူ မရွှေပွင့် ပြဇာတ်၊ ပထမတွဲ (ဆရာလွမ်း) - ၁၉ဝ၉ ခုနှစ်
ကဗျာသာရတ္တ သဂြုင်္ိဟ် (ဆရာလွမ်း) - ၁၉၁ဝ ခုနှစ်
သီရိဓမ္မာ သောက မင်းကြီး ပြဇာတ် (ပ-တွဲ) (ဆရာလွမ်း) –
မြန်မာ ရာဇဝင်ချုပ်နှင့် ရွှေနတ်တောင် ဘုရားသမိုင်း (ဆရာလွန်း) - ၁၉၁၁ ခုနှစ်
လက်မှုပညာ ဋီကာ (Hard Book of Useful Recipes) - ၁၉၁၃ ခုနှစ်
ဗိုလ်ဋီကာ (မစ္စတာမောင်မှိုင်း) - ၁၉၁၄ ခုနှစ်
ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် အတ္ထုပ္ပတ္တိစာတန်း -
ဆောင်းပါး ပေါင်းချုပ်ကြီး (ပထမတွဲ) (မစ္စတာမောင်မှိုင်း) - ၁၉၁၄ ခုနှစ်
မှာတော်ပုံ ဝတ္ထု (ပထမတွဲ) (မစ္စတာမောင်မှိုင်း) - ၁၉၁၆ ခုနှစ်
အီနောင် နန်းတွင်းဇာတ်တော်ကြီး - ၁၉၁၇ ခုနှစ်
ဓမ္မစေတီ (မင်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ) ဝတ္ထု - ၁၉၁၈ ခုနှစ်
ကေသာသီရိ နန်းတွင်း ဇာတ်တ်ာကြီး - ၁၉၁၈ ခုနှစ်
မှာတော်ပုံ ဝတ္ထု (ဒုတိယတွဲ) - ၁၉၁၉ ခုနှစ်
ပဲခူး ရာဇဝင် ဇာတ်တော်ကြီး - ၁၉၁၉ ခုနှစ်
ဒေါင်းဋီကာသစ် - ၁၉၂ဝ ခုနှစ်
ဘွိုင်းကောက် ဋီကာကြီး - ၁၉၂၁ ခုနှစ်
မှာတော်ပုံ ဝတ္ထု (တတိယတွဲ) - ၁၉၂၁ ခုနှစ်
မှန်နန်း ရာဇဝင်တော်သစ် (ပထမအုပ်) - ၁၉၂၂ ခုနှစ်
မျောက်ဋီကာ - ၁၉၂၃ ခုနှစ်
မျောက်ဂဏ္ဌိ - ၁၉၂၃ ခုနှစ်
ခွေးဋီကာ - ၁၉၂၅ ခုနှစ်
ဒေါင်းဂဏ္ဌိ (ပထမတွဲ) - ၁၉၃၁ ခုနှစ်
ဂဠုံပျံ ဒီပနီဋီကာ - ၁၉၃၁ ခုနှစ်
မန္ဈလေးမြို့ ရွှေရေးဆောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးကြည်၏ ထေရုပ္ပတ္တိကထာ - ၁၉၃၅ ခုနှစ်
ခွေးဂဏ္ဌိ (ပထမတွဲ၊ ဒုတိယတွဲ) - ၁၉၃၆ ခုနှစ်
သခင်ဋီကာ - ၁၉၃၈ ခုနှစ်
အာဇာနည်ဗိမာန် - ၁၉၄၈ ခုနှစ်
ဗမာ ပြည်တွင်းရေး မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်း မည်နည်း သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး - ၁၉၄၈ ခုနှစ်
အနာဂတ် ဇာတ်ခုံ အိပ်မက် ဒီဠုံ ဋီကာ - ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ်
လေးချိုးပေါင်းချုပ် (ပထမတွဲ) - ၁၉၅၅ ခုနှစ်
လေးချိုးပေါင်းချုပ် (တတိယကြိမ်) - ၁၉၆၈ ခုနှစ်
မှာတော်ပုံ နှင့် စစ်ကိုင်းပြန် မှာတော်ပုံ - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
လက်ရွေးစင် လေးချိုးတရာ - ၁၉၇၃ ခုနှစ်
တို့ဗမာ ဝတ်ရွတ်စဉ် - ၁၉၇၆ ခုနှစ်
ကျော် ၄ ဆူ ဘုရားတိုင် လေးချိုးကြီးများ
သခင် ညီလာခံ သြဘာ ဆောင်းပါးများ
(မောင်စံသူ) ရွှေနန်းဘွဲ့ မှာတမ်း - ၁၉၁၃ ခုနှစ်
(မဏိကက်) နန်းတွင်း ဇာတ်တော်ကြီး - ၁၉၁၇ ခုနှစ်
(ဦးဘိုးသစ်) ကဗျာရေးနည်း နိသျှည်းကျမ်းကြီး - ၁၉၂၄ ခုနှစ်
(မောင်ချစ်စရာ) မြန်မာစာ ညွန့်ပေါင်း ဋီကာ - ၁၉၂၅ ခုနှစ်
တောင်တွင်းကြီးမြို့ ဆရာတော် ဟိတသိဒ္ဓက ဝတ္ထု - ၁၉၂၉ ခုနှစ်
ပုံတောင်နိုင် မော်ကွန်း - ၁၉ ? ခုနှစ်
(ဦးထွန်းဖေ) မြန်မာစာ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်းချုပ် - ၁၉၃၃ ခုနှစ်
ဒုတိယ နဝဒေး စကြာမင်း မယ်တော် ဆင်ဖြူရှင်မ ဧချင်း - ၁၉၃၄ ခုနှစ်
(သခင် လေးမောင်) ဒို့ဝတ္တရားကြီး - ?
မြဒေါင်းညို (ဦးအောင်သိန်း) ဝသုမြေ (ပထမပိုင်း) - ၁၉၃၈ ခုနှစ်
(ဦးအုန်းမောင်) ကျောင်းသုံး မြန်မာ ရာဇဝင်သစ် - ၁၉၄၈ ခုနှစ်
(ဗိုလ်သိမ်းဆွေ) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ - ၁၉၅၁ ခုနှစ်
(မဟာတင်) လွတ်လပ်ရေး နှင့် ဗိုလ်ချုပ် မော်ကွန်း - ၁၉၅၂ ခုနှစ်
(ဆရာရွှေ)မြန်မာ ရှေးဟောင်း ကဗျာညွန့်ပေါင်း - ?
တရုတ် အရပ်ရပ်ရောက်သည့် အရေးတော်ပုံ - ?
ဦးဦးမှော်ဆရာဂရု၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by wanna23 at 08:05